Waa maxay farqiga u dhexeeya alaabada CBD 'Daawooyinka' iyo 'Cuntada dheeriga ah'? • Dawooyinka Inc.eu
Waa maxay faraqa u dhexeeya alaabada CBD 'Daawooyinka' iyo 'Cuntooyinka lagu daro'?
Waxyaabaha ku saleysan Cannabis waxay kasbadeen aqoonsi sii kordhaya labada warshadood ee caafimaadka iyo fayoobaanta sanadihii la soo dhaafay, iyada oo guud ahaan cannabinoid ay ka heleyso fiiro gaar ah bulshada cilmi baarista iyo guud ahaan bulshada.
1 Faa'iidooyinka suurtagalka ah ee alaabada CBD ee dukaanka laga iibsado
2 Heerarka iyo baaritaanka darajada dawada ee CBD
3 Wax soo saarka CBD: fasalka dawooyinka iyo tafaariiqda
3.1 Kalsoonida alaabooyinka CBD ee lagu iibiyey miiska
3.2 Awoodda iyo qiyaasta CBD
CBD, sidoo kale loo yaqaan magaceeda aan la jarin Cannabidiol, wuxuu noqday walxaha ugu weyn ee jahwareerka soo saara alaabada, oo ay ku jiraan Boqortooyada Midowday. Suuqa tafaariiqda ee CBD kuma fidin oo keliya alaabada la cuni karo ee CBD sida shukulaatada, cabaada iyo cabitaannada, laakiin sidoo kale daryeelka maqaarka iyo alaabada qurxinta, iyo sidoo kale waxyaabo fayoobaanta dhaqameed badan sida saliidda saliidda iyo kaabsulka.
CBD-da loo isticmaalo soosaarka alaabooyinka sida tan waxaa loo kala saaraa inay tahay kaabis nafaqo oo ay raacdo xeerarka UK iyo EU. Tan macnaheedu waa inay dhexdhexaadinayaan Hay'adda Heerarka Cunnada oo aan la tixgelin, sidoo kalena aan loo calaamadinaynin inay yihiin shey caafimaad.
Dhinaca kale, CBD waxaa sidoo kale loo isticmaalaa alaabada caafimaadka sida Epidyolex - isticmaalkiisa oo si adag loo xakameeyo oo kaliya laga heli karo rijeetada takhtar takhasus leh. Laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya labadan nooc ee wax soo saarka CBD?
Faa'iidooyinka suurtagalka ah ee alaabada CBD ee dukaanka laga iibsado
Guusha warshadaha CBD, labadaba Boqortooyada Midowday iyo dalal kale oo badan oo adduunka ah, waxaa inta badan horseeday caddaymo aan caadi ahayn oo ay weheliso natiijooyinka tijaabooyinka caafimaad ee xadidan. Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala ayaa ku dhiirraday suurtagalnimada wax soo saarka CBD si loo yareeyo welwelka iyo walbahaarka, oo laga caawiyo seexo oo xitaa kaa caawiya taas xanuun iyo soo kabashada murqaha.
In kasta oo caddaynta qaddarinta ee arrintan la xiriirta ay xoog badan tahay, haddana waxaa jira daraasado caafimaad oo yar oo hadda si buuxda u taageeraya faa'iidooyinka laga dareemay CBD. Cilmi-baarista ku saabsan cannabinoid ayaa sii kordheysa, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in tijaabooyinkan lagu fulinayo xashiishadda xashiishka ee si taxaddar leh loo kontaroolo qiyaas aad uga sarreysa sidii aad ku heli lahayd wax soo saarka waddooyinka.
In kasta oo badeecooyinka laga iibsado CBD ay dadka ka caawin karaan gargaarka calaamadaha qaarkood, sida kuwa aan horay u soo sheegnay, soo saarayaasha ayaa ku xaddidan sameynta nooc kasta oo sheegasho caafimaad ah. Tani waa sababta oo ah alaabooyinka aan lagu soo rogin qiimeyn caafimaad ama baaritaan. Waxa kale oo muhiim ah in la xasuusto in CBD qof walba si kala duwan u saameynayo, sidaa darteed halka hal qof laga yaabo inuu la kulmo gargaar cajaa'ib leh oo ka timaadda alaabada CBD, ka kalena laga yaabo inuusan dareemin wax farqi ah haba yaraatee
Heerarka iyo baaritaanka darajada dawada ee CBD
Si ka duwan alaabada laga iibsado CBD (OTC) CBD, alaabooyinka caafimaad ee ku saleysan cannabidiol ayaa ku xiran tiro ka mid ah wax soo saarka iyo ruqsadaha shatiga.
Kahor intaan daawooyinka loo ansixin dawooyinka EU iyo Boqortooyada Midowday, waa inay ka gudbiyaan rukhsad daaweyn wakaaladda dawooyinka Yurub. Tan macnaheedu waa in daawada iyo shirkadda dawooyinka ay tahay inay u hoggaansamaan 'Laylka Sheybaarka Wanaagsan', 'Dhaqtarka Daaweynta Wanaagsan' iyo 'Tababbarka Waxsoosaarka Wanaagsan'.
Intaas waxaa sii dheer, soo-saareyaashu waa inay soo gudbiyaan macluumaadka ku saabsan sheyga iyo natiijooyinka tijaabooyinka bukaan-socodka ee qiimeynta ee Hay'adda Dawooyinka Yurub.
Wax soo saarka CBD: tayada dawooyinka iyo tafaariiqda (afb.)
Qiimeyntani waxay tixgelinayaan kiimikada iyo sifooyinka jireed ee badeecada, faa'iidooyinka ay soo sheegaan kooxaha bukaanka, iyo khataraha iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara isticmaalka alaabta. Khataraha iyo dhibaatooyinka soo raaca ayaa sidoo kale si joogto ah loola socdaa ka dib ogolaanshaha daroogada.
Wax soo saarka CBD: fasalka dawooyinka iyo tafaariiqda
Si ka duwan daawooyinka CBD-ku saleysan sida Epidyolex, waxyaabaha ka soo baxa CBD sida tinctures saliida iyo waxyaabaha la cuni karo oo si fudud loo heli karo iyada oo aan dhakhtar qorin ama internetka aan lagu soo darin tijaabooyin caafimaad ama baaritaanka heerka daawada.
Kalsoonida alaabooyinka CBD ee lagu iibiyey miiska
In kasta oo tijaabada sheybaarka alaabtan badanaa la heli karo - si loo hubiyo heerarka cannabinoid iyo in la hubiyo inaad heshay waxaad bixisay - alaabooyin badan oo laga heli karo khadka tooska ah iyo waddooyinka dheer ayaa badanaa si khaldan loogu calaamadeeyay. Tusaale ahaan, daraasad ay sameysay Xarunta Daawada Xashiishadda bishii Juun 2019 ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad kalabar alaabooyinka la tijaabiyay laga soo qaatay, tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday ay si qaldan u sheegtay maadada CBD. Xaqiiqdii, mid ka mid ah alaabtaan ayaa dhab ahaantii ku jirin cannabidiol gabi ahaanba.
Markaan sidaas iri, waxaa muhiim ah in la caddeeyo in sidoo kale ay jiraan tiro badan oo tayo sare leh, sumcado lagu kalsoonaan karo oo hadda la heli karo. Intaa waxaa sii dheer, waqtiga kama dambaysta ah ee shahaadada Novel Foods ee bisha Maarso ee sanadkan waxay u badan tahay inay baabi'in doonto qaar badan oo ka mid ah noocyada tayada hooseeya ee ka shaqeeya warshadaha.
Awoodda iyo qiyaasta CBD
Mid kale oo ka mid ah farqiga u dhexeeya waxyaabaha ka soo baxa CBD ee la iibsado iyada oo aan dhakhtar qorin iyo kuwa kaliya lagu heli karo ee dhakhtar qoro waa xoogga iyo qiyaasta lagu taliyey. Qiyaasta bilowga ah ee Epidyolex, oo loogu talagalay daaweynta suuxdinta diidmada ah, waa 2,5 mg / kg, oo u kordheysa 5 mg / kg toddobaad kadib. Macnaha guud, ml kasta oo ah xalka Eidyolex wuxuu kakooban yahay 100mg oo CBD ah.
Taa bedelkeeda, waxyaabaha loogu yeero CBD ee lagu iibiyo dukaanka (OTC: miiska) inta badan waxaa ku jira heerar aad u hooseeya oo ah cannabidiol aan si fiican loo tijaabin. Waxyaabahani waxay had iyo jeer la yimaadaan talooyin qiyaaseed oo aan u dhawayn qiyaasaha loo isticmaalo ujeedooyinka caafimaadka.
In kasta oo dad aad u tiro badani ay soo mareen saamayn wax ku ool ah ka dib markii ay isticmaaleen alaabooyinka OTC CBD, waxaa muhiim ah in la xusuusto in aan loo isticmaalin beddel ahaan dawooyinka loogu talagalay xaaladaha caafimaad ee halista ah. In kasta oo cilmi-baarista hadda la sameeyay ay muujisay in CBD-da aysan waxyeello u lahayn qiyaasta dhexdhexaadka ah ama xitaa sareysa, waa inaad dabcan ka badnaan talooyinka qiyaasta ee ku taxan shey kasta oo CBD ah.
Haddii aad raadineyso caawimaad caafimaad adoo adeegsanaya CBD ama kuwa kale cannabinoids, waa inaad doorbidaa inaad had iyo jeer kala hadasho tan dhakhtarkaaga marka hore.
Ilaha waxaa ka mid ah BloomBotanics (EN), Canex (EN), Quora (EN)
CBDsaliid cbdEuropadaawodaawada cawskacilmi baarisdaawoBoqortooyada Ingiriiskasharciga
Gaajo ma ka qabtaa CBD mise waxay kaa caawineysaa inaad miisaan lumiso?
Cannabidiol (CBD) waa mid ka mid ah xeryahooda badan ee laga helo geedka xashiishka. CBD waxaa loo isticmaalaa ...
CBD ma caawin kartaa ciyaartooyda inay diirada saaraan?
Ciyaartooydu waa kuwo is bedbeddela. Waa inay iskudarsadaan hibada isboorti maskax furan iyo ...
Waxyaabaha CBD-ka ee ka imaanaya guryaha?
Waxay ka shaqeysaa cuduro badan: hurdo la'aan ilaa cambaar, laga bilaabo ADHD ilaa joojinta sigaar cabista: ...
Livestream: Erasmus MC iyo Embrace Life oo ku saabsan cilmi baarista ku saabsan saameynta saliida xashiishadu ay ku leedahay burooyinka maskaxda
Johns Hopkins wuxuu tijaabinayaa marijuana caafimaad sidii daaweyn macquul ah oo loogu talagalay cuncun joogto ah
Dowladda Isbaanishka ayaa baareysa faa'iidooyinka sharciyeynta xashiishadda caafimaadka
"Godfather of Canadian Weed" waxay muujineysaa xiisaha barta caanka ah ee loo yaqaan 'Pornhub' oo ay la socdaan maalgashadayaal
Gaadiidka daroogada oo ay kujiraan 5 milyan oo kiniini ah Captagon amphetamine ayaa muujinaya ganacsiga sharci darada ah ee Bariga Dhexe